Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo ku wajahan Tukaraq
TUKARAQ, Puntland - Wafdi balaaran oo ka socda saaxiibadda dalka Soomaaliya ayaa waxay ku wajahan yihiin deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaasoo ay ku dirirayeen baryihii udambeeyay maamulada Puntland iyo Somaliland.
Wafuudda oo ka kala socota Qaramada Midoobey, Midowga Yurub, Midowga Afrika, Itoobiya, Marekanka, Ingiriiska iyo xubno kale ayaa waxaa la filayaa inay la fariistaa labadda dhinac ee colaadooda sii jiitamaysay tan iyo 2002.
Maxamed Maxamuud Dhuunkaal, oo kamid ah saraakiisha ciidanka ee Somaliland oo la hadlay Idaacadaha Maxaliga, ayaa wuxuu sheegay in wafdigaan ay yihiin kuwa labadda maamul kala dhex-geli doona, isagoona ku tilmaamay “Nabad-dhaliyaal”.
Waa uu diiday inuu bixiyo mac-luumaad dheeri ah oo ku saabsan socodaalka Wafdigaan, laakiin wuxuu xaqiijiyey inay tagayaan Tukaraq maanta oo Sabti ah, islamarkana uu salka ku hayo safarkooda xaalada sii xumaanaysa ee Tukaraq.
In ka badan 50 askar ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 100 way ku dhaawacmeen dagaal mar kale dib uga qarxay deegaanka Tukaraq halkaasoo maalintii Khamiista, waxaana lasoo sheegayaa in xaaladu tahay mid degan.
Socodaalka wafdigaan ayaa wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dhowaan war-saxaafadeed ay soo saareen Beesha Caalamka ku dalbadeen inay joojiyaan dagaalka, islamarkaana ay Miiska wadahdalka ku xaliyaan Khilaafkooda.
Mareykanka ayaa isku dayay inuu dhex-dhexaadin ka sameeyay dagaalka dhiiga ku daadanaya...
Digniin laga soo saaray Colaadda Puntland iyo Somaliland
Soomaliya 28.06.2018. 11:24
Puntland oo war kasoo saartey 'caburinta' shacabka Laascaanood
War Saxaafaded 30.05.2018. 15:19
Weerar ka dhacay Laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay
Puntland 24.06.2018. 13:17
Wadada loo marayo xalka Colaada Tukaraq oo la shaaciyay
Soomaliya 22.06.2018. 00:11